MISS BOENY 2018 : Tontosa ny 23 septambra teo ny fifaninanana santatra sy ny antsasa-dalana
Nitohy avy hatrany tamin’ny dingan’ny manasa-dalana ny fifaninanana Miss Boeny 2018 taorian’ny fifanintsanana savaranonando. 25 septembre 2018
Tao amin’ny Resto bar Sunset etsy aminy Chez Karon no nandray ireto zatovovavy nahafeno ny fepetra tao anatin’ny masontsivana napetrak’ ireo mpikarakara. Isan’ireo fepetra napetraka nanivanana azy ireo ny halava izay 1,65 no ho miakatra sy ny fahalalana ankapobeny mikasika ny Faritra Boeny manokana, niampy ny salan-taona 18 ka hatramin’ny 25 taona notadiavina ary tsy mbola niteraka.
Ny Ofisim-paritry ny fizahantany, izay tarihin-dRanjatonantenaina Toky Armel sy ny sampan-draharaham-paritry ny fizahantany, tarihin-dRamamonjisoa Angelo, tale aty an-toerana ; teo koa ny sampan-draharam-paritra ny kolontsaina sy ny vakoka ary ny haivoary no nanome voninahitra ny hetsika. Ny avy ao amin’ny sampam-paritry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana tarihin’i Tsiavanga Hanta, fa indrindra ny création Léa Fashion, izay nikajy ny fanaingoana ny bika aman’endrik’ireo zatovovavy mpandray anjara no niara-nitoto io hetsika " Miss Boeny 2018” io.
Izay lany ho voalohany amin’ny famaranana, izay hatao ny 28 septambra ho avy io, ao amin’ny Baobab tree, no hisolo tena ny Faritr’i Boeny amin’ny fifaninanana "Miss Mada 2019" atao any Antananarivo. Mialoha ny famaranana dia misy ny fanomanana azy ireo sy fanofanana mikasika ny filatroana ho an’ireo tafita tamin’ny dingan’ny manasa-dalana tamin’iny 23 septambra teo iny. Amin’ny 25 septambra izao no hiditra ny villa Miss Boeny, ao aminy Blue bay eny Amborovy ireo mpifaninana amin’ity Miss Boeny 2018 ity, no sady tafiditra ihany koa amin’ny hetsika fialan-tsasatra lehibe izay maresaka tokoa aty aminy Faritra Boeny.
Nodimandry teo amin’ny faha-63 taonany i Jean Robert VERY OLOMANGA ANTSIRANANA (225) 12 juin 2019 Tratran’ny mpifaninana taminy nangala-bato i Nepatraiky Rakotomamonjy KANDIDA DEPIOTE IHOSY (223) 12 juin 2019 Miaramila miisa 34 naiditra am-ponja vonjimaika HETSIKA FAMPANDRIANA FAHALEMANA (197) 12 juin 2019 Saron’ny zandary tao an-tranony ireo poketran’olona voaendaka JIOLAHY RAINDAHINY TRATRA TENY ITAOSY (168) 11 juin 2019 Mandà ny endrika tsindry rehetra atao aminy ny Hcc VOKA-PIFIDIANANA OFISIALY (161) 11 juin 2019 Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora LEHILAHY TRATRA NANGARONA NY PAOSIN’ NY NAMANY (147) 13 juin 2019